musha WWE Superstars Bio Randy Orton Mwana weChiitiko Plus Untold Biography Facts
Childhood Biography inopa Nyaya Yakazara yeWWE Superstar uye mutambi anozivikanwa zvikuru nezita remadunhurirwa. “Nyoka”.
Our Randy Orton Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvika panguva.
Hongu, munhu wese anoziva nezvekuonekwa kwake kwakati wandei muWWE. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Randy Orton's Biography, iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
Randy Orton Childhood Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure.
Kune Biography kutanga, Randal Keith Orton akazvarwa pazuva re1st raApril 1980 muKnoxville, Tennessee, United States. Akanga ari mwana wekutanga akaberekwa naamai vake, Elaine Orton, uye kuna baba vake, Bob Orton Jr (aimbova nyanzvi wrestler).
Kunyange zvazvo Orton akaberekerwa muKnoxville, akakurira muSt. Louis, Missouri nevanin'ina vake Nathan naRoderick, pamwe chete nehanzvadzi yake Becky.
Kukura muSt. Louis, iyo inonyanya kuzivikanwa nebasa rayo remitambo yebaseball, doro pamwe neGateway Arch, mudiki Randy akatanga kufarira mutsimba.
Kufarira kwake mutambo uyu kwainyanya kutorwa senhaka yemhuri nekuda kwekuti sekuru vake baba Bob Orton Sr, baba Bob Orton Jr naSekuru Barry Orton vaive vakwikwidza mubhizimusi remutsimba.
Uye zvakare, aive fanboy weakare anozivikanwa wrestlers, kusanganisira Hulk Hogan.
Izvo zvaingova zvakasarudzika kuti Orton afunge kutsika nzira dzababa vake nasekuru, chiitiko chisina kufamba zvakanaka nevabereki vake.
Kune rake divi, baba vaOrton vakasimbisa kuti kuva mutsimba kwaizoita kuti agare kure nevadikani apo amai vake vakamurayira kuti asarudze rimwe basa.
Randy Orton Dzidzo:
Orton akanga asiri mumwe wekubvumira kutya kwevabereki vake kumudzivisa kubva pakudzinga chido chake chehuduku. Kushingairira kwake kuve mutambi wemutsimba kwakamuona achienda kuHazelwood Central School, iyo yaive nemutsimba sechikamu chemitambo yayo yemitambo.
Pamusoro pezvo, iyo institution yaizivikanwa nekuve netimu yewrestling inoshanda.
Yakanga iri pachikoro apo Randy akavandudza hunyanzvi hwake hwekurwa seamateur wrestler.
Sezvineiwo, iye aisazivikanwa semunhu anonetsa kunyangwe aine simba rekuvaka muviri. Akapedza chikoro mu1998 uye akagara kwenguva refu achiremekedzwa alumnus yenzvimbo yekudzidzira.
Randy Orton Nyaya Yemauto:
Orton paakanga ari kuHazelwood, airatidza kufarira pfuti uye aive pedyo zvakanyanya nemukuru aitora basa kuHazelwood, aive Marine.
Kubudirira kwakazivisa chisarudzo chake chekujoinha United States Marine Corps (mushure mekupedza chikoro chesekondari) achitanga kukamba yemabhoti muSan Diego, CA.
Kutevedzana kwemauto ehondo kuvaka-up saw randy vanoenda kuchikoro chekumhanya kwaanoenda ndokuva mutungamiri wemauto uye mutungamiri.
Orton aive zvakadaro, akatongerwa dare rekuenda kuAwol nekusateerera murairo kubva kumukuru wake.
Kwapera mwedzi, akasunungurwa pamabasa ake, ashanda mazuva 38 mujeri remauto. Makore 18 gare gare, Orton aizoda panguva yekubvunzurudzwa kukuru neBooker T, anobvuma chikonzero nei asina kumbofamba zvakanaka mumutumbi;
Ndakanga ndisisina ushingi hwokufira nyika yangu.
Randy Orton Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
Kuburitswa kunonyadzisa kwaOrton kubva kuMarine Corps kwakatorwa mune ramangwana rakanaka nevabereki vake avo vakasara vasina sarudzo asi kutsigira zvishuwo zvake zvekuva mutsimba.
Kuti zviitike, baba vaOrton vakamuchengetedza chibvumirano chekusimudzira neWWE kuburikidza nerubatsiro rweshamwari dzake dzekare. Achitaura nezve chibvumirano makore gare gare, Orton anoyeuka kuti:
Baba vangu vakadana vaviri vehama dzake - Tony Garea, Jack Lanza. Vaiva vamiririri panguva iyoyo, magwagwa. Vaiva nechiratidziro muSt. Louis munaOctober we1999. Ndakaburuka, ndikasangana naLanza, ndakasangana naGarea. Uye vakandibhadhara, pakarepo.
Uye zvakare, baba vake pamwe nevashandi vewrestling kusimudzira vakadzidziswa Orton kuMid Missouri Wrestling Association-Southern musangano Illinois Musangano Wrestling (MMWA-SICW) kwaakatanga kuita muna 2000.
Randy Orton Biography - Kumuka Mukurumbira Nhau:
Iwo akateedzana ekudzidziswa ayo Orton akawana pa (MMWA-SICW) akashandiswa zvakanaka apo WWE (yaizivikanwa seyepasi rose wrestling Federation WWF) yakamuendesa kuOhio Valley Wrestling (OVW).
Yaive paOVW iyo Orton akarwa neanofarira e John Cena (iyo inonzi inozivikanwa sechiratidziro) uye yakagadzira boka reti tag naBobby Eaton.
2002 raive gore rakakosha kuna Orton uyo mutambo wekutanga terevhizheni wakamuona achikunda Hardcore Holly uye akazove fan anofarira mwedzi gare gare.
Hazvina kutora nguva refu Orton asati azvizivisa se "The Legend Killer", akagadzira kufamba kwake kweRKO uye muna 2004 akakunda Chris Benoit (panguva yeSummerSlam yemakwikwi epasi rese reheavyweight) kuti ave shasha yepasirose (ane makore makumi maviri nemana) muWWE. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Samantha Speno ndiani? Randy Orton Wife?
Randy Orton ndomumwe wevakakurumbira vekuAmerica, kusanganisira Kim Kardashian West naMariah Carey vakaroora kanopfuura kamwe.
Tinokuunzira chokwadi nezvehupenyu hwake hwehukama, kutanga nekusangana kwaakaita uye kuroora mukadzi wake wekutanga Samantha Speno.
Orton naSamantha vakatanga kusangana pabhawa mu2013 uye vakave nehukama hwehukama mushure. Vakatora hukama hwavo kune danho rinotevera nekuita chibvumirano mu2005 uye kusunga banga mu2007.
Ukama hwavo hwakakomborerwa nemwanasikana Alanna Marie Orton akaberekerwa mu2008.
Kutevera kuzvarwa kwaAlanna Marie, vaviri ava vakagara munzvimbo dzisina chokwadi vasati vazivisa kupatsanurana kwavo murunyararo mu2012, zvichiteverwa nekurambana muna2013.Vaviri vakaparadzana vachiri kuchengetedza hukama hwakanaka saRandy anoshanyira mwanasikana wake Alanna mumaoko aSpeno.
Uye zvakare, Orton anobhadhara $ 4500 pamwedzi yekutsigira mwana sechikamu chekurambana kwavo kugadzirisa. Achienderera mberi, Orton akasangana nemukadzi wake wazvino Kim Marie Kessler pachiitiko cheWWE mu2014.
Yavo aive musoro pamusoro pezvitsitsinho mhando yerudo saKim aigara achida Orton semufesi apo Orton aikwezva kwaari pakutanga kuona.
Izvo hazvina kutora nguva refu vasati vavimbisana uye vakaroora mu2015.
Ukama hwavo hunokomborerwa nemwanasikana, Brooklyn Rose. Randy anogara achifara nomudzimai wake nomwanasikana. Pamusoro pezvo, anoita basa rehubaba kuvanakomana vatatu vaive naKim kubva kumuchato wekare.
Randy Orton Hupenyu Hwemhuri:
'Iyo Viper' yakakurira mumhuri ye6 tinokuunzira ruzivo nezve mhuri yake.
Nezve Amai vaRandy Orton:
Elaine Orton ndiye amai vechizvarwa chechitatu WWE superstar. Iye mukoti akanyoreswa uye zvakare amai kune vanun'una vaOrton, Nathan naBecky.
Elaine akaroora baba vaOrton Bob Orton Jr uye vaviri ava vakayeuchidza kuroora kubvira ipapo.
Nezve baba vaRandy Orton;
Bob Orton Jr inguva imwe nyanzvi wrestler uyo ainyanyo kuzivikanwa nein'i zita rekuti Cowboy.
Akave nebasa rakabudirira mukurwisana muWWE (iyo yainzi inonzi World Wrestling Federation WWF). Mukuwedzera, akaita zviratidzo zvekukwikwidza kwakasiyana-siyana muJapan, United States mune dzimwe nyika.
Nezve vanun'una vaRandy Orton:
Nathan Orton ndiye munun'una waRandy Orton. Nathan uyo anonyanya kuzivikanwa saNate ndiye ganda uye funnier shanduro yemukoma wake mukuru Randy.
Zvakare, Nathan anoita zvekusekesa kuti awane chouviri. Pamusoro pezvo, ane zvaanofarira kuridza gitare uye zviitiko zvinowedzera kusimba.
Chinyanyo kuzivikanwa nezvaRandy Orton Sista Becky uyo akaroora murume wake Tim Lampe mu2009. Saizvozvowo hazvisi zvakawanda zvinozivikanwa nezvemumwe mukoma waRandy Roderick.
Randy Orton Mazita emazita:
Orton ane mazita emazita anoverengeka ayo anonyanya kufemerwa nemitambo yake mukurwira Rings. Mazita emadunhurirwa anosanganisira: "Muurayi Wengano", "Iyo Viper", "Iyo Apex Predator" uye "Randy Boreton". Vamwe ndevaya "Akanyarara Mhondi", "Anorova", "Mr RKO OUTTA IZVOZVI!" uye "Murume ane chiuru cheMusoro"
Randy Orton Untold Biography Chokwadi - Kwete Kurwa chete:
Chizvarwa chechitatu Wrestler haiganhurise kutaridzika kwake kumakundano ekurwira sezvo iye akaonekwa mune akati wandei emamuvhi anozivikanwa pakati pawo ari: Ndozvandiri (2011), 12 Round 2: Reloaded (2013) pamwe neWWE Studios firimu Iyo Inotongwa 2.
Randy aifanirwa kuratidzira mune yekuita firimu Iyo Marine 3: Kumba kwekumberi asi akatsiviwa nemumwe waakarwa naye nekuda kwekuchema kweruzhinji pamusoro pekusagona kwake basa rakapihwa rake rakashata rekare semugungwa.
Iyo RKO Inofamba:
Pfumo rinotenderera nderekuti Kutonga kweRoma kungofanana neRKO ndiyo inoshandiswa kuRandy Orton. Kufamba kunoitwa kubva kune avo Vakatanga zita rake (Randal Keith Orton) yakaratidza kuve manejimendi anoshanda kwazvo izvo zvakakonzera kumuka kwaRandy mukurumbira.
Kukura kwaiita Randy Orton nzvimbo yake kwakazivikanwa muna 2017 paakaramba chikumbiro chemufani wekutora pikicha yake kune yekurovedza muviri muJonesboro Arkansas.
Kutaura pamusoro pechiitiko icho munhu anozivikanwa seMartin anorondedzera kuti:
"Ndakaswedera kwaari ndoga ndikati, 'Ndingawana mifananidzo yako here ?,'" fan, Anthony Martin, akaudza North Northeast Arkansas Report. "Akandipa bump uye ndakapindura, 'Ndine urombo. Handikwanisi kukunzwa, 'achitaura kune earphone dzake. Takaenda nenzira dzedu dzakasiyana. "
Martin aive asiri wekusiya sezvo akabata pikicha yaOrton, chiitiko chakaita kuti 'Iyo Viper' irasike kutonhorera.
"Akandiona ndakatora mufananidzo wacho uye akauya kwandiri akandisangana nechiso changu ndokuti, 'Chii chauri kuita [kududzira]? Ndakati hapana [mifananidzo] inosvibisa! Iwe uri [kuparadza] mapenzi here? '" Martin akati.
Orton akasimbisa chiitiko ichi kuburikidza nekupindura kuburikidza nekuwanda kweTweets.
Sezviri pachena ndakakuvadza mafeni manzwiro pandakamuudza kuti F abve kunzvimbo yekurovedza zuro. Ndiyo nhau? Zvave kuitika kwemakore gumi nemashanu. #getalife
- Randy Orton (@RandyOrton) January 18, 2017
Ndakabhadhara kudzidzisa. Pakati pezvose seti, handikwanise kutora mifananidzo. Iye anofanirwa kuyamwa iyo F kumusoro uye kuenda kunzvimbo yekurovedza muviri kuti adzidzise kusave fan mukomana. https://t.co/I8rFn5N8qO
Randy Orton Untold Biography Chokwadi - Kushandisa Zvinodhaka:
Nepo varwi vashoma vakapihwa benz yekushandisa yekuvaraidza uye yekuita-inosimudzira zvinodhaka Randy Orton chete ane yakanyorwa nhoroondo yekushandisa steroid.
Kushandisa kwake steroids kwakaunzwa mukurumbira muna 2007 apo Sports Illustrated yakaburitsa chinyorwa pawebhusaiti yayo ichiratidza kushandiswa kwakawanda kweSteroids mumitambo uye mutsimba.
Zvakaratidzawo kuti Orton nevamwe varwi vanonzi vakawana clomiphene citrate, anastrozole, uye steroid stanozolol, nandrolone, oxandrolone, uye testosterone.
Zvinopomedzerwa zvinoita kunge zvine mvura sezvo Orton mu2015 akamboreurura kushandisa yakawanda madhiragi mumazuva ekutanga ebasa rake. Zvinoenderana neWWE Superstar:
“Hupenyu hwese hwaive kwandiri kwemakore akati wandei kuti ndaizowana sei kusimudzwa, kwaive kwakasviba uye kusuwa uye kusuruvara kwakanaka. Ini ndaive nematambudziko aya, ndaive nezvinhu izvi muhupenyu hwangu zvandaiita izvo zvaigona kuzondiuraya ”.
Randy Orton Chokwadi cheMunhu:
Randy Orton ane maitiro anotevera kumunhu hwake.
Orton ane Ushingi sezviri pachena muchisarudzo chake chekumanikidza kubuda kunze kwemauto emumvura. Randy akatsunga zvakare, hunhu hwaakaratidza kuve imwe yeakanakisa eWWE.
Chishuvo chake chekumira pasina chaanoita mukuzadzisa zvinangwa zvake zveBasa akamuona achikuvara. Inonyanya kufarirwa ndeyekukuvadzwa kwake kwekorasi pamwe chete nefudzi re hypermobile.
'Mr RKO' murume uye baba vane shungu vanoda kupedza nguva nemhuri yavo. Nezve zvaasingadi, anovenga kutyorwa kwekuvanzika kwake. Pamwe chete nemabasa asingaite zvakanakisa matarenda ake ekuzvarwa.
CHOKWADI CHINOGONA: Vongai nekuverenga kwedu Randy Orton Childhood Story. Plus untold biography chokwadi. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!